Sawiro - Diblomaasi
Dowladda Tigray-ga waxay wacad ku martay inay difaaci doonto dhulka ay maamusho
Warbixin hoos u dhaca dhaqaale ee Somaliland iyo saamaynta cudurka korona
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Siyaad Bare
Sawirka: Saddex sarkaal oo booliis ah ayaa maray afafka hore ee Taawarka Eiffel ee ku yaal Paris. Look Global Look Press / Alexis Sciard
"Hadda waan arkaa sida ay xaaladda isugu baddashay jacayl iyo xannaaneyn," ayey tidhi.
Anine Kierulf, lataliyaha gaarka ah ee machadka xuquuqul insaanka ee Norway.
Guri Melby waa siyaasi reer Norway ah oo katirsan xisbiga Liberal Party. Waxay ahayd hogaamiyaha xisbiga sidoo kale waa wasiirka waxbarashada, 2020 (Sawirka waxaa iska leh NRK)
Wasiirada Waxbarashada Noorway Guri Melby ayaa tiri "Macalimiinta xor bay u yihiin inay ardeyda tusaan sawirada laga sameeyey Nebi Muxamed"
Haween kasoo jeeda dhammaan qeybaha bulshada ayaa ka qeyb galay mudaharaadkii looga soo horjeeday sharciga dhalshada ee ka dhacay Shaheen Bagh
Bilkis waxay qeyb ka ahayd dumar si nabad ah uga mudaharaadayay sharciga dhalashada, oo ku sugnaa deegaanka Shaheen Bagh
Waxaa la sheegay in la xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku dhinteen 358 qof iyo 228 qof oo dhaawac ah.
Sawirka waa Quincy Floyd iyo Rev Al Sharpton - aaskii aabihiis
Wiilka George Floyd wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay in dadku ku mudaaharaadaan magaca aabihiis
Sawirka: Machadka Dhaqanka ee Google / Wikimedia Commons / Public Domain
Muuqaalkaan wuxuu muujinayaa nolosha maalmeedka gudaha dalka Waqooyiga Kuuriya.
Pablo Escobar waxaa lagu naanneesi jiray "Boqorka kookeynka". Pablo Escobar waa dambiilaha ugu taajirsan taariikhda, wuxuu uruursaday qiyaastii $ 30 bilyan oo doollar waqtiga dhimashadiisa.
"Naftu waa qaali ee ma og tahay," ayey tiri mid ka mid ah dadka kasoo baracakay gobolka Shabeellada hoose oo la hadashay BBC Somali.
Wakhtiga caruurnimada ma jiraan wakhti lamid ah noloshaada, waxayse ku xeran tahay hadba halka aad ku kortay.